ပျက်စီးသွားတဲ့သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို ဘယ်လိုပြန်ပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲ? – Trend.com.mm
လူတိုင်းမှာ အနည်းဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ရှိကြတာပါပဲ။သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အထဲကမှ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း၊အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၊မေးထူးခေါ်ပြော သူငယ်ချင်းဆိုပြီး ကွဲလွဲသွားကြတာပါ။မိသားစုပြီးရင် အရင်းနှီးဆုံးဆွေမျိုးဆိုတာ သူငယ်ချင်းပါပဲ။ ချစ်သူရည်းစား ဆိုတာ မကောင်းရင်ဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ရပေမဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့သံယောဇဉ်၊ သူငယ်ချင်းအချစ်ကတော့ တမူထူးခြားပါတယ်။ချစ်သူရည်းစားဆိုတာ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲတမ်းမရှိနိုင်ပေမဲ့သူငယ်ချင်းကတော့ ကိုယ့်အနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာဆိုတာ မမေ့ထားပါနဲ့။လူတစ်ကိုယ်စိတ်တစ်မျိုးဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ခါတစ်လေစိတ်အခန့်မသင့်ရင်
သူငယ်ချင်းတွေရန်ဖြစ်လေ့ရှိကြပေမဲ့ အချိန်တန်တော့လည်းပြန်ပြီး တပူးပူးတတွဲတွဲဖြစ်သွားတာ ပါပဲ။ဒါပေမဲ့…
သံယောဇဉ်ဆိုတာ နက်ရှိုင်းလေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြလေ ပြဿနာတက်တဲ့အခါ ပိုပြီးနာကျင်ရလေပါပဲ။နားလည်မှုလွဲမှားပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သံသယတွေနဲ့ မခေါ်မပြောတဲ့အထိဖြစ်သွားရင် စိတ်ထဲကဘယ်လောက်ပဲသံယောဇဉ် လက်ကျန်ရှိရှိ ပြန်စခေါ်ဖို့ခက်သွားပါပြီ။ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ စမခေါ်တဲ့အခါ ပိုပြီးဝေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲကတော့ဘယ်မေ့နိုင်မလဲ။အတူသွား အတူလာ၊စိတ်ချင်းပေါင်းခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလေ။
တကယ်လို့များ သင်က သင့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့နားလည်မှုလွဲမှားပြီးမခေါ်မပြောပဲနေနေတယ် ဆိုပါတော့။တကယ်ရော သင့်စိတ်က သူ့ကိုသူငယ်ချင်းအဖြစ်စွန့်လွှတ်နိုင်ပြီလား? ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက တစ်ယောက်ယောက်ကမှားနေလို့ပါပဲ။ဒါမှမဟုတ် ကြားလူတွေကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အထင်မြင်လွဲမှားတာမျိုးပေါ့။ ဘယ်သူ့ဘက်ကမှစမခေါ်ရင် တည်းတည်းလေးကျန်တော့တဲ့သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်တွေ ပျက်စီးသွားတော့မှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့် အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ပြီးအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
သင်တို့နှစ်ယောက် သူငယ်ချင်းစဖြစ်တဲ့အချိန်တွေ၊အတူသွားခဲ့ကြတဲ့နေရာတွေ၊သင် သူ့အပေါ်ကောင်းခဲ့တာတွေ၊သူ သင့်အပေါ်ကောင်းခဲ့တာတွေ၊နှစ်ယောက်သား အတူတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာတွေပြန်စဉ်းစားပါ။ပြီးတော့ ပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်အချိန်အထိ သင်က သူ့အတွက်သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ခဲ့လား၊သူကရော သင့်အတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ခဲ့လား ပြန်စဉ်းစားပါ။အစပထမတော့ နှစ်ယောက်သား သွေးပူဒေါသထွက်လို့ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရပ်စဲခဲ့ကြပေမဲ့အခုလို ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ စိတ်ပြေပြီး သံယောဇဉ်တွေကို ပြန်ပြီးနွေးထွေးလာစေပါတယ်။အဲ့ဒီအခါ ဘယ်သူကပဲ စခေါ်ခေါ် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။
သင်တို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပြဿနာတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာပါ။ကြားလူတွေကြောင့်လား ၊နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်လို့နားလည်မှုလွဲမှားကြတာကြောင့်လား? မိသားစုဆွေမျိုး၊ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လား အဖြေရှာပါ။ပြဿနာတိုင်းမှာ အဖြေရှိပါတယ်။အဖြေရှာကြည့်ပါ။
တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေမတွေ့ရတာကြာပေမဲ့ ပြန်တွေ့တဲ့အခါ အရင်လိုပဲနွေးထွေးသွားကြပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ပြဿနာတက်နေလို့ မတွေ့ပဲနေရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ပြဿနာတော်တော်များများကို မဖြေရှင်းနိုင်တာက မပွင့်လင်းလို့ပါပဲ။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ ဆက်ဆံရင် ဒီပြဿနာကပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘယ်သူမှားလဲစဉ်းစား ၊ပြီးရင် မှားတဲ့သူက တောင်းပန်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဘယ်သူမဆို အမှားကိုဝန်ခံတောင်းပန်ရင် ခွင့်လွှတ်တတ်ကြပါတယ်။
သူစိမ်းတွေတောင် ပြန်ပြေလည်သေးတာ။သင်တို့က အရင်းနှီးဆုံးဆွေမျိုးတွေလေ။တောင်းပန်ပေမဲ့ ခွင့်မလွှတ်မှာကို မကြောက်ပါနဲ့။အရင်ဆုံး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်ပါ။
ဒါက အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ။ဘ၀တစ်ကွေ့မှာ ဒီလိုပြဿနာပေါင်းသောင်း ခြောက်ထောင် ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲကြုံကြုံ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်မွေးပါ။သူငယ်ချင်းတွေကြားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပါ။ သူငယ်ချင်းအပေါ် သစ္စာရှိပါ။
ဒီအချက်တွေကိုသာသေချာမှတ်ထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကိုပြန်ပြီးကုစားနိုင်မှာပါ။ဘ၀မှာ မိသားစုက အစားထိုးမရနိုင်သလို သူငယ်ချင်းဆိုတာ လည်း အစားထိုးမရနိုင်ပါဘူး။
လူတိုငျးမှာ အနညျးဆုံးသူငယျခငျြးတဈယောကျကတော့ ရှိကွတာပါပဲ။သူငယျခငျြးဆိုတဲ့အထဲကမှ အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြး၊အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး၊မေးထူးချေါပွော သူငယျခငျြးဆိုပွီး ကှဲလှဲသှားကွတာပါ။မိသားစုပွီးရငျ အရငျးနှီးဆုံးဆှမြေိုးဆိုတာ သူငယျခငျြးပါပဲ။ ခဈြသူရညျးစားဆိုတာ မကောငျးရငျဖွတျပဈလိုကျလို့ရပမေဲ့ သူငယျခငျြးဆိုတဲ့သံယောဇဉျ၊ သူငယျခငျြးအခဈြကတော့ တမူထူးခွားပါတယျ။ခဈြသူရညျးစားဆိုတာ ကိုယျ့အနားမှာ အမွဲတမျးမရှိနိုငျပမေဲ့သူငယျခငျြးကတော့ ကိုယျ့အနားမှာအမွဲတမျးရှိနမှောဆိုတာ မမထေ့ားပါနဲ့။လူတဈကိုယျစိတျတဈမြိုးဆိုတဲ့အတိုငျး တဈခါတဈလစေိတျအခနျ့မသငျ့ရငျ
သူငယျခငျြးတှရေနျဖွဈလရှေိ့ကွပမေဲ့ အခြိနျတနျတော့လညျးပွနျပွီး တပူးပူးတတှဲတှဲဖွဈသှားတာ ပါပဲ။ဒါပမေဲ့…
သံယောဇဉျဆိုတာ နကျရှိုငျးလေ တဈယောကျကိုတဈယောကျ အရမျးခဈြကွလေ ပွဿနာတကျတဲ့အခါ ပိုပွီးနာကငျြရလပေါပဲ။နားလညျမှုလှဲမှားပွီးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သံသယတှနေဲ့ မချေါမပွောတဲ့အထိဖွဈသှားရငျ စိတျထဲကဘယျလောကျပဲသံယောဇဉျ လကျကနျြရှိရှိ ပွနျစချေါဖို့ခကျသှားပါပွီ။ဘယျသူ့ဘကျကမှ စမချေါတဲ့အခါ ပိုပွီးဝေးသှားတတျကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ စိတျထဲကတော့ဘယျမနေို့ငျမလဲ။အတူသှား အတူလာ၊စိတျခငျြးပေါငျးခဲ့ကွတဲ့သူငယျခငျြးတှလေေ။
တကယျလို့မြား သငျက သငျ့ရဲ့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးနဲ့နားလညျမှုလှဲမှားပွီးမချေါမပွောပဲနနေတေယျ ဆိုပါတော့။တကယျရော သငျ့စိတျက သူ့ကိုသူငယျခငျြးအဖွဈစှနျ့လှတျနိုငျပွီလား? ပွဿနာတဈခုဖွဈပွီဆိုကတညျးက တဈယောကျယောကျကမှားနလေို့ပါပဲ။ဒါမှမဟုတျ ကွားလူတှကွေောငျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျအထငျမွငျလှဲမှားတာမြိုးပေါ့။ ဘယျသူ့ဘကျကမှစမချေါရငျ တညျးတညျးလေးကနျြတော့တဲ့သူငယျခငျြးသံယောဇဉျတှေ ပကျြစီးသှားတော့မှာပါ။အဲ့ဒါကွောငျ့ အရမျးခဈြကွတဲ့သူငယျခငျြးတှေ ပွနျပွီးအဆငျပွနေိုငျဖို့ နညျးလမျးလေးတှပွေောပွပေးခငျြပါတယျ။
သငျတို့နှဈယောကျ သူငယျခငျြးစဖွဈတဲ့အခြိနျတှေ၊အတူသှားခဲ့ကွတဲ့နရောတှေ၊သငျ သူ့အပျေါကောငျးခဲ့တာတှေ၊သူ သငျ့အပျေါကောငျးခဲ့တာတှေ၊နှဈယောကျသား အတူတူပြျောရှငျခဲ့ကွတာတှပွေနျစဉျးစားပါ။ပွီးတော့ ပွဿနာတှမေဖွဈခငျအခြိနျအထိ သငျက သူ့အတှကျသူငယျခငျြးကောငျးဖွဈခဲ့လား၊သူကရော သငျ့အတှကျ သူငယျခငျြးကောငျးဖွဈခဲ့လား ပွနျစဉျးစားပါ။အစပထမတော့ နှဈယောကျသား သှေးပူဒေါသထှကျလို့ သူငယျခငျြးအဖွဈ ရပျစဲခဲ့ကွပမေဲ့အခုလို ပွနျစဉျးစားလိုကျတဲ့အခါ စိတျပွပွေီး သံယောဇဉျတှကေို ပွနျပွီးနှေးထှေးလာစပေါတယျ။အဲ့ဒီအခါ ဘယျသူကပဲ စချေါချေါ အရေးမကွီးတော့ပါဘူး။
သငျတို့သူငယျခငျြးနှဈယောကျ ပွဿနာတကျရတဲ့အကွောငျးရငျးကိုရှာပါ။ကွားလူတှကွေောငျ့လား ၊နှဈယောကျလုံးရဲ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျအရမျးခဈြလို့နားလညျမှုလှဲမှားကွတာကွောငျ့လား? မိသားစုဆှမြေိုး၊ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့လား အဖွရှောပါ။ပွဿနာတိုငျးမှာ အဖွရှေိပါတယျ။အဖွရှောကွညျ့ပါ။
တဈခြို့သူငယျခငျြးတှမေတှရေ့တာကွာပမေဲ့ ပွနျတှတေဲ့အခါ အရငျလိုပဲနှေးထှေးသှားကွပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ ပွဿနာတကျနလေို့ မတှပေဲ့နရေငျ ပိုဆိုးပါတယျ။ပွဿနာတျောတျောမြားမြားကို မဖွရှေငျးနိုငျတာက မပှငျ့လငျးလို့ပါပဲ။တဈယောကျကိုတဈယောကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသာ ဆကျဆံရငျ ဒီပွဿနာကပွလေညျသှားပါလိမျ့မယျ။ဘယျသူမှားလဲစဉျးစား ၊ပွီးရငျ မှားတဲ့သူက တောငျးပနျဖို့မမပေ့ါနဲ့။ဘယျသူမဆို အမှားကိုဝနျခံတောငျးပနျရငျ ခှငျ့လှတျတတျကွပါတယျ။
သူစိမျးတှတေောငျ ပွနျပွလေညျသေးတာ။သငျတို့က အရငျးနှီးဆုံးဆှမြေိုးတှလေေ။တောငျးပနျပမေဲ့ ခှငျ့မလှတျမှာကို မကွောကျပါနဲ့။အရငျဆုံး ကိုယျလုပျစရာရှိတဲ့အလုပျကိုသာလုပျပါ။
ဒါက အတှအေ့ကွုံတဈခုပါပဲ။ဘဝတဈကှမှေ့ာ ဒီလိုပွဿနာပေါငျးသောငျး ခွောကျထောငျ ကွုံလာရနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲကွုံကွုံ ခေါငျးအေးအေးနဲ့ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ကွိုးစားပါ။ ရငျ့ကကျြတဲ့စိတျမှေးပါ။သူငယျခငျြးတှကွေားပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိပါ။ သူငယျခငျြးအပျေါ သစ်စာရှိပါ။
ဒီအခကျြတှကေိုသာသခြောမှတျထားပွီးလုပျမယျဆိုရငျ သငျတို့ရဲ့ ပကျြစီးသှားတဲ့ သူငယျခငျြးသံယောဇဉျကိုပွနျပွီးကုစားနိုငျမှာပါ။
ဘဝမှာ မိသားစုက အစားထိုးမရနိုငျသလို သူငယျခငျြးဆိုတာ လညျး အစားထိုးမရနိုငျပါဘူး။